Daaweynta shucaaca Proton ee Kansarka Beerka - Proton California
Ku daawee kansarka beerka Proton Therapy
Ku daawee kansarka Beerka beerka Proton Therapy
Farsamaynta iskaanka teknoolojiyadda tijaabada ah ee loo yaqaan 'Jaamiciyada' sawir qalooca qallafsan ee 'California Protons' waa qaab aad u sax ah oo lagu daweeyo shucaaca kansarka kaasoo u saamaxaya dhakhaatiirteena inay si weyn u bartilmaameedsadaan burooyinka beerka ee leh astaamaha sare ee aagga.
Marka la barbar dhigo daaweynta daweynta ee wadnaha firfircoon ee shucaaca wadata ee talaalka ah, teknoolojiyada baarista qalin-jabinta waxay si sax ah ugu gudbineysaa daaweynta shucaaca kansarka beerka gudahooda 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabada lakabka waxaanan yareyn karnaa waxyeelada unugyada iyo xubnaha jirka ee caafimaadka qaba. Tani waxay muhiim u tahay bukaanka kansarka beerka sababta oo ah beerka ayaa udub dhexaadka u ah dhamaan dhiiga ku wareegaya jirka. Badanaa, bukaannada kansarka beerka waxay leeyihiin cudurro kale oo salka ku haya beerka sida cirrhosis iyo cagaarshow, sidaa darteed yareynta shucaaca unugyada beerka ee caafimaadka qaba iyo xubnaha ku xeeran waa muhiim. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Iyaga oo la shaqeynaya koox isku dhaf ah oo ka hawl gasha UCSD, California Protons waxay siisaa dawaynta shucaaca proton beam shucaaca burooyinka aasaasiga ah ee beerka oo ay ka mid yihiin hepatocellular carcinoma iyo cholangiocarcinoma (kansar ku samaysma tuubooyinka bile). Tijaabooyin tijaabo ah oo kontorool ah oo kontaroolayaal ah ayaa muujisay in proton beam uu yahay mid amaan ah oo wax ku ool ah marka laga yimaado suurta galnimada sunta iyo kororka xakamaynta maxalliga marka loo barbar dhigo kimikalka ku-meelgaarka ah.
Kansarka beerka koowaad
Macdanta Beerka ama burooyinka kansarka ee ka yimid meelo kale - sida xiidankaaga, naaskaaga, xameetida, maqaarka iyo sambabbada - oo ku faafay beerka
Ilaali calooshaada, kelyaha, xiidmaha yar yar iyo beerkaaga caadiga ah
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Daaweynta Kansarka Beerka
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u doortaan shucaac heer sare ah burooyinka kansarka ee kansarka, iyo in la yareeyo qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Dhakhaatiirtu waxay si xulasho leh u meelayn karaan shucaac sare oo buradaada, iyadoo isla mar ahaantaana yareynaysa qaddarka xubnaha jirkaaga ee muhiimka ah, sida calooshaada, kelyahaaga iyo xiidmahaaga yar. Faafinta unugyadan caafimaadka qaba waa mid aad muhiim u ah maadaama burburka dhismayaashan xasaasiga ahi ay yeelan karaan waxyeelo weyn oo ay u horseedi karaan kansarka labaad.
Farsamooyinka takhasuska leh waxaa loo isticmaali karaa daaweynta proton-ka si loogu bar tilmaameedsado burada soo socota leh saxsanaanta farsamo ee weyn. Tani waxay muhiim u tahay bukaanka kansarka beerka maxaa yeelay markasta oo aad neefsato, beerkaagu wuu dhaqaaqayaa.
Daaweynta Proton ee Kansarka Beerka
Iyada oo ku xidhan marxaladda kansarka beerka, daweynta isku dhafan ee qalliinka isu-ekaanta, duugista, embolization, kemotherapy iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka beerka. In kasta oo daweynta keliya ee lagu daaweeyo ay u egtahay qalliin ama u-beddelasho beerka, daaweynta proton ee kansarka beerka waxay bixin kartaa xakameyn buro gudaha ah oo wax ku ool ah iyada oo ay tahay ikhtiyaarka daaweynta ka nabdoon daaweynta ka badan daaweynta kale. Xulashada daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka beerka, da'da, caafimaadka guud, doorbidyada shaqsiyadeed iyo haddii bukaanku qabo cudurka beerka ee salka ku haya sida cirrhosis iyo cagaarshow.
Marxaladda I ee kansarka beerka, waxaa ku dhaca hal buro beerka. Inta soo hartay ee beerka waa caafimaad qabaan xididdada dhiigga ee u dhowna wax saameyn ah ma leh. In kasta oo laga saarayo qaybta cudurka ee beerka iyada oo loo marayo qalliinka u eg ama ku-tallaalidda beerka ayaa ah qaababka daaweynta ee ugu caansan, daaweynta shucaaca ee heerka I ee kansarka beerka waxaa badanaa lagula taliyaa in la yareeyo halista kansarka soo fida ama u fida.
Heerka II ee kansarka beerka, waxaa jira dhowr burooyin ah oo ka yar 2 inji dherer ama buro ayaa ku soo noqotay xididdada dhiigga. In kasta oo laga saarayo qaybta cudurka ee beerka qalliinka u eg ayaa ah daaweynta ugu badan, daaweynta shucaaca ayaa laga yaabaa in lagu taliyo ka hor ama ka dib qalliinka si loo yareeyo buro ama loo caawiyo yareynta halista kansarka soo noqoshada. Bukaan-socodka ayaa waliba noqon kara musharrax u beddelashada beerka.
Marxaladda III kansarka beerka, ugu yaraan hal buro ayaa ka weyn 2 inji guud ahaan ama burooyinka ayaa isku beddelay xidid weyn ama dahaadhka xubin kale. Uguma faafin qanjidhada qanjidhada ama goobo fog. Iyadoo laga saarayo qaybta buka ee beerka iyada oo loo marayo qalliinka qalliinka waa daaweynta ugu caansan, daaweynta shucaaca ayaa lagula talin karaa ka hor ama ka dib qalliinka si loo yareeyo buro ama loo yareeyo halista kansarka soo laabashada. Haddii bukaanku u qalmo ku-deeqidda xubnaha, beerka oo la beddelo oo dhammaystiran ayaa sidoo kale lagu talin karaa.
Heerka kansarka beerka ee heerka IV, burooyinka waxay ku fidaan qanjidhada unugyada jirka ama xubnaha fog. Bukaan-socodka kansarka beerka ee heerka-XNUMXaad, daaweynta daroogada sida kemotherabi waa daaweynta ugu weyn ee lagula taliyay. Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiation treatment' ayaa loo isticmaali karaa in lagu gaabiyo burooyinka ama loo xakameeyo xanuunka.
Kansarka Beerka ee Soo noqnoqda
Natiijooyinka Daaweynta Daaweynta Kansarka Beerka & Saamaynta Muddada-dheer
Daaweynta daaweynta Proton ee Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protons ee ku taal San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah tan shucaaca raajada, iyadoo la yareynayo saameynta mustaqbalka ee halista nolosha ee ay ugu wacan tahay shucaac ku dhaca caloosha, kelyaha iyo xiidmaha yar. Waxay kaloo yareyn kartaa fursadaha kansarrada sare nolosha dambe sababa la xiriira shucaaca oo yaraada u soo bixista unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran iyo xubnaha.
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton-ka ee Kansarka Beerka
Daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy' ee hepatocellular carcinoma
Ku-celcelin ku-daweynta proton beam therapy hepatocellular carcinoma
Meelaynta qalliinka kululeeyaha iyo shucaaca proton-ka ee loo yaqaan 'hepatocellular carcinoma' oo aan la sheegi karin
Daaweynta stereotactic jirka proton ee metastases beerka
Qiyaasta sare ee proton beam radiotherapy ee hepatocellular carcinoma: natiijooyinka horudhaca ah ee tijaabada wejiga II.